In ka badan 100 qof oo ku dhimatay dagaalka Soomaalida iyo Canfarta - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka In ka badan 100 qof oo ku dhimatay dagaalka Soomaalida iyo Canfarta
In ka badan 100 qof oo ku dhimatay dagaalka Soomaalida iyo Canfarta
Maamulka deegaanka Soomaalida iyo maamulka Canfarta ayaa ka hadlay dagaalkii dhacay degaano ku yaal galbeedka Gobolka Siti ee dowlad degaanka Soomaalida, kaas oo geystay khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah oo aad u farabadan.
Wasiirka Warfaafinta ee deegaanka Soomaalida Cali Beddel ayaa guulo ka sheegtay dagaalka,isaga oo sheegay inay maleeshiyaadka canfarta ka dileen 25 Ruux, kadib markii ay soo weerareen.
Wasiirka oo la hadlay Wakaaladda Wararka ee Reuters ayaa sheegay in Ciidamada Dowlad degaanka Soomaalida, iyaga oo difaacaya Shacabka ay gareen guulo waweyn howlgalkana uu sii socon doono.
Dhinaca kale Taliye ku-xigeenka booliiska Canfarta Axmed Xumed oo la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegay in dagaalka ay ku dhinteen ilaa 100 askari oo labada dhinac ah, waxaana uu ku eedeeyay in Ciidamada dowlad degaanka Soomaalida ay weerarka soo qaadeen.
“Ciidamada gaarka ah ee deegaanka Soomaalida waxay weerareen aagagga Haruk iyo Gewane iyagoo adeegsanaya hub culus oo ay ka mid yihiin qoryaha darandooriga u dhaca iyo bambooyin. Carruur iyo haween ayaa la dilay iyagoo hurda,” ayuu yiri Axmed.
Warrakii ugu dambeeyay ee saaka naga soo gaaraya degaanadii lag dagaalamay ee Galbeedka Gobolka Siti ayaa waxaa ay sheegayaan in halkaasi lagad areemay xiisad dagaal oo u dhaxeysa dhinacyadii dagaalamay.
Previous article4,000 oo qof oo maalin gudaheed u dhimatay COVID-19
Next articleKooxda Daacish oo afduubatay 19 Ruux